Natomboka ny Fanambarana vaovao any Glasgow momba ny hetsika momba ny toetrandro amin'ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Natomboka ny Fanambarana vaovao any Glasgow momba ny hetsika momba ny toetrandro amin'ny fizahantany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • tompon'andraikitra • News sustainability • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fanambarana Glasgow Vaovao
Amin'ny fihaonambe COP26 momba ny toetr'andro amin'ity herinandro ity, ny fizahan-tany dia nanambara ny hamehana ara-toetr'andro, hetsika iray hanohanana ny hetsika momba ny toetrandro, dia hanambara fa lasa fandaharan'asa momba ny toetrandro an'ny Travel Foundation. Ho fanampin'izany, ny Travel Foundation dia hampiseho ny anjara asany manokana amin'ny fanomezana fanohanana mitohy ho an'ny "Fanambarana Glasgow momba ny hetsika momba ny toetr'andro amin'ny fizahantany" vao haingana, izay miara-miasa amin'ny World Tourism Organization (UNWTO) an'ny Firenena Mikambana.
Ireo fanambarana roa ireo dia mametraka ny Travel Foundation ho lohalaharana amin'ny ezaka hiantohana ny orinasam-pizahantany sy ny toeran'ny fizahantany dia afaka manafoana haingana, mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manohana ny fanavaozana ny tontolo iainana.
Ny Travel Foundation sy ny UNWTO dia mikatsaka fiaraha-miasa mba hanafainganana ny tanjon'ny hetsika.
Izy ireo koa dia manosika ny fanirian'ny Fanambarana Glasgow amin'ny ambaratonga iray mba hahatratrarana ny tanjon'ny toetr'andro manerantany.
The fanombohana ny Fanambarana Glasgow tamin'ny COP26 tamin'ny 4 Novambra dia nanamarika dingana lehibe ho an'ny hetsika momba ny toetrandro eo amin'ny fizahantany. Na ny Tourism Declares na ny Travel Foundation dia samy mpikambana ao amin'ny Komitin'ny Fandrafetana Antoko dimy ho an'ny Fanambarana - fanoloran-tena manerantany ho an'ny fikambanana rehetra amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany hanapaka ny entona entona amin'ny sehatra amin'ny antsasany amin'ny taona 2030, mba hampifanaraka ny drafitry ny hetsika momba ny toetrandro manerana ny "lalana" dimy. ary hanao tatitra ampahibemaso momba ny fandrosoana vita.
Entanina ny fikambanana rehetra amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manohana ny Fanambarana, ary ny andraikitry ny Tourism Declares dia ny hanohana sy hanentana, hanafaingana ny hetsika momba ny toetr'andro miaraka amin'ny fanamafisana ny fitovian'ny toetrandro sy ny faharetana, ary ny filan'ny vondrom-piarahamonina alehany.
Amin'ny fitondrana ny Tourism Declares ao anatin'ny fikambanany sy ny fiaraha-miasa amin'ny UNWTO mba hitantana ny hetsika fanambaran'i Glasgow, ny Travel Foundation dia manamafy ny andraikiny amin'ny maha-fikambanana mandeha amin'ny hetsika momba ny toetrandro amin'ny fizahan-tany. Hanomboka fandaharanasa hetsika mifantoka amin'ny hetsika toy ny:
Mamoaka tatitra momba ny fandrosoana isan-taona ho an'ny Fanambarana Glasgow, manome fanadihadiana momba izay nanao sonia ny Fanambarana, ary ny fomba fandrosoan'izy ireo amin'ny fanoloran-tenany.
Mamolavola fomba fiasa tsy miovaova, manerana ny sehatra amin'ny fandrefesana sy ny tatitra karbônina.
Fitsapana lalana fomba vaovao hiatrehana ireo andraikitra saro-pady sy ifampizarana eo ambanin'ny entona “sehatra 3” (rojo sanda), izay miseho amin'ny ankapobeny any amin'ny toerana haleha.
Fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-monina – ohatra amin'ny alalan'ny Tourism Declares an-tserasera sy tambajotra an-tsitrapo, ary ny fananganana foibem-paritra.
Manangana ny fahaizan'ireo mpanao sonia Fanambarana Glasgow, ary mampitombo ny fahalalana ilaina, fitaovana ary fitaomam-panahy ilaina amin'ny fanovana manerana ny sehatra.
Ny Travel Foundation ihany koa dia hitarika ny fandrindrana ny Komitin'ny Mpanolo-tsaina ho an'ny Fanambarana Glasgow izay hivory ao anatin'ny rafitry ny Programan'ny fizahan-tany maharitra iray ao amin'ny UN mba hiantohana ny fahasamihafana, ny fitoviana ary siansa momba ny toetrandro no ivon'ity hetsika ity. Ny fizotry ny tatitra momba ny toetrandro mifandray amin'ny Fanambarana Glasgow dia hotantanana amin'ny alàlan'ny One Planet Network ihany koa.
Jeremy Smith, mpiara-manorina ny Tourism Declares a Climate Emergency, dia nilaza hoe: “Ny Fanambarana Glasgow dia tsy fanomezan-toky fotsiny fa fanoloran-tena handray andraikitra amin'ny fampihenana ny etona amin'ny fizahantany amin'ny 2030, ary hitatitra ny fandrosoana vita isan-taona. Tena ilaina ny manomboka amin'ny faniriana marina, fa avy eo dia tena manomboka ny asa mafy. Ny maha-ampahany amin'ny Travel Foundation dia ahafahantsika mitondra ny ezaka ataontsika amin'ny ambaratonga manaraka ho an'ny fiantraikany manerantany. "
Jeremy Sampson, Tale Jeneralin'ny Travel Foundation, dia nilaza hoe: "Fantatsika fa tsy maintsy miara-miasa sy mivoatra tsy misy toy ny teo aloha, mampifandray ny fomba 'ambony' sy 'ambany' amin'ny alàlan'ny fanetsiketsehana ny hetsika fiaraha-monina ary mamorona fitaovana ho an'ny fanovana manerana ny governemanta. ary orinasa. Ny fiovan'ny fizahantany mankany amin'ny toetrandro tsara dia momba ny fiovan'ny fizahan-tany amin'ny ankapobeny ihany koa, ny fifindrana amin'ny maodely mitombina kokoa izay mampifandanja ny filan'ny mponina sy ny orinasa ary mitantana sy mampihena ny enta-mavesany amin'ny toerana haleha.
Ny Travel Foundation and Tourism Declares dia handray anjara amin'ny hetsika ofisialy COP26 an-tserasera hanamarihana ny fandefasana ny Fanambarana Glasgow, amin'ny Alakamisy 4 Novambra, amin'ny 1400-1600 GMT miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka VisitScotland, NECSTouR ary ny hoavin'ny fiaraha-miasa amin'ny fizahantany. Afaka misoratra anarana ianao mba hiditra sy handray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra Eto.